Qiimaha Qudaarta Magaalada Muqdisho Oo In Ka Badan 120% Sare U Kacay
Abaaraha dalka ka jira ayaa saameyn xooggan ku yeeshay gebi ahaanba nolosha malaayiin Soomaali ah oo dalka gudahiisa ku sugan oo isugu jira beeraley, xoolaley iyo reer guuraaba. Waxaana abaarta laga dareemayaa magaalooyinka waweyn ee dalka sida magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Goobjoog Business ayaa u kuur-gashay sida abaaraha ay saameyn ugu yeelatay qiimaha qudaarta ee magaalada Muqdisho. Waxaana jira sare kac xooggan oo ku yimid qiimaha qudaarta marka loo barbar-dhigo qiimahii la iibin jiray abaarta ka hor.
Cabdullaahi Cabdi Axmed waxa uu kamid yahay ganacsata qudaarta ay usoo dagto kuna iibiya suuqa weyn ee Bakaaraha, waxa uuna Goobjoog Business uga warramay isbadalka ku yimid qudaartii magaalada soo gali jirtay iyo dhaqdhaqaaqa suuqa qudaarta ka jira.
“Qudaartii markii hore suuqa soo gali jirtay hadda mid ka yar ayaa soo gasha, 15 illaa iyo 25 gaari oo qudaar ah ayaa waqtiyadii hore soo gali jirtay magaalada balse hadda maalinta ugu badan 5 gaari ayaa suuqa timaado” Cabdullaahi oo ka warbixinayay qudaarta suuqa soo gasha maalintiiba ayaa sidaa yiri.
Dadka suuqa Bakaaraha qudaarta ku iibiya oo ay Goobjoog Business weydiisay in ay jiraan degmooyin gebi ahaanba awoodi waayay in qudaartii ay Muqdisho usoo dhoofin jireen usoo dhoofiyaan waqti xaadirkan iyo inkale ayaa ku jawaabay in aysan jirin qudaar ka timaada degmada Afgooye oo kamid aheyd degmooyinka qudaarta looga soo dhoofin jiray magaalada Muqdisho.
Degmada Shalambood ayaa kamid ah degmooyinka laga soo qaado qudaarta waqti xaadirkan timaado magaalada Muqdisho, waxaana ganacsatada ay sheegayaan in ay ku timaado qiima aad u sarreeya.
Xog ay soo aruurisay Goobjoog Business ayaa tilmaameysa in qiimaha qudaarta suuqyada magaalada muqdisho ay sare u kaceen in ka badan 120% marka loo barbar-dhigo abaaraha ka hor. Shaxdan hoose waxaan isbarbar-dhig ku sameynay qiimaha qaar kamid qudaarta inaga oo ka fiirineyno qiimaha hadda la iibiyo iyo qiimahii la iibin jiray abaarta ka hor.
Qudaar Qiima Hore Qiimo Dambe Farqi
Cambe (1xabo birimo) 3,000 Sh.So 10,000 Sh.So 7,000 Sh.So
Yaanyo (Tanag) 150,000 Sh.S 450,000 Sh.So 300,000 Sh.So
Kabsar Caleyn 40,000 Sh.So 95,000 Sh.So 50,000 Sh.So
Liin dhanaan (kiilo) 8,000 Sh.So 16,000 Sh.So 8,000 Sh.So
Mooska (1xabo birimo) 1,500 Sh.So 2,300 Sh.So 800 Sh.So
Qaraha (1xabo birimo) 25,000 Sh.So 40,000 Sh.So 15,000 Sh.So
Bocorka (1xabo birimo) 5,000 Sh.So 9,000 Sh.So 4,000 Sh.So
Dhanka kale waxaa jira qudaar gebi ahaanba kasii dabar go’eysa suuqyada magaalada Muqdisho, sida uu innoo xaqiijiyay Cabdullaahi Cabdi, waxaana qudaartaas kamid ah: babaayga, cambaha iyo liin birinjiga
Goobjoog Business ayaa la xiriirtay qaar kamid ah beeraleyda ku sugan Gobolka Shabeelaha Hoose iyo Shabeelaha Dhexe oo kamid ah gobolada beerashada iyo qudaarta caanka ku ah.
Beeraleyda iyo dadka qudaarta ka dhoofiyo goboladaas ayaa inoo sheegay in aysan jirin qudaar badan oo soo go’da waqti xaadirkan, waxaana arrintaasi ay ku sababeeyeen dhowr arimood oo ay kamidyihiin abaaraha dalka ka jira iyo webiga oo guray.
Mid kamid ah beeraleyda degmada Jannaale ee Gobolka Shabeelaha Hoose oo Goobjoog Business la hadlay ayaa yiri “Beeraleyda culays ayaa saaaran. Roob ma jiro, biyaha wabigana laba bilood iyo bar lama arkin. Qudaar ma jirto, jiirgaanka yaanyada ah 200,000 Shilin Soomaali ayaa la iibinayaa. Sakeelka bisbaaskana 250,000 Sh.So ayaa la kala siisanayaa. Waa lacag aad uga badan intii la iibin jiray”
Si kastaba, abaaraha dalka ayaa sameyn weyn ku yeeshay nolosha reer guuraaga iyo magaala joogaba. Waxaana abaartan lagu tilmaamay in ay tahay abaartii ugu darneyd ee in muddo ahba Soomaaliya soo martay.